बिहे नभएको युवतिले शिशु लुकि छेपी फ्याले … त्यसपछि कु’कुरले खाँ’दै थियो शि’शु (भिडियो) – Taja Khawar
बिहे नभएको युवतिले शिशु लुकि छेपी फ्याले … त्यसपछि कु’कुरले खाँ’दै थियो शि’शु (भिडियो)
प्रकाशित मिति: बिहिबार, बैशाख ३०, २०७८ समय: ११:२१:४२
प्युठानमा भएको एक घटनाले मानिस कति सम्म नि’ष्ठुरी हुन्छ भन्ने कुरा प्रमाणीत भएको छ । गाउँमा एक जना ३५ वर्षकी अविवाहित महिला थिइन् । उनको गाउँका कसैसंग प्रेम थियो । उनको प्रेम को संग थियो भन्ने कसैले थाहा पाएनन् । तर घटना यहाँ सम्म पुग्ला भन्ने कसैले कल्पना
कपाल झरेर हैरान हुनुहुन्छ? अपनाउनुस् सजिलो घरेलु उपाय – Samachar Post Dain…
पनि गरेका थिएनन् ।उनीहरुको स’म्बन्ध’वाट जन्मिएको जवजात शिशुको यस्तो निधन देखेर गाउँलेहरु पनि च’कित् परेका छन् । महिलाले शिशु ज’न्माएर जंगलमा फा’लि’छन् । कुकुरले त्यो नवजात शिशुलाई खा’एको अवस्थामा गाउँलेले देखेपछि घटना सार्वजनिक भएको हो । उनको पेट ठूलो भएको गाउँलेले देखेका थिए ।
छोरीको यस्तो अवस्था देखेपछि परिवारका सदस्यले त्यसवारेमा सोधिखोजी गर्लान् भन्ने गाउँलेलाई लागेको
थियो । तर परिवारका सदस्यले सोध्दा उनले उल्टै वि’वा’द गरिन् । घरमा वि’वा’द भएको दुई दिन पछि उनको श’रिर फरक देखिएको थियो । सु’त्के’री भएको जस्तो श’रि’र देखेपछि गाउँलेले फेरी शं’का गरे । यिनले शिशु ज’न्माएर के गरिन् होला ? भन्ने सोच्दै थिए । त्यसको दुई दिन पछि गाउँको कुकुरले शिशुको श’व खाँ’दै गाउँमै ल्यायो । त्यस पछि घ’ट’नाको र’हस्य खुलेको हो ।
Last Updated on: May 13th, 2021 at 11:21 am